अभिनेता चन्दनको कोरोना सङक्रमणका कारण निधन – Sandesh Press
August 20, 2021 231
पुराना अभिनेता चन्दन रोक्काको निधन भएको छ । उनको बिहिबार बिहान शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो ।
उनी केही दिन पहिले कोरोना संक्रमित भएपछि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा उपचार भइरहेको थियो । एक साता अगाडि भने उनको कोरोना रिपोट नेगेटिभ आएको थियो ।
कोरोना रिपोट नेगेटिभ आएपनि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको कारण उनको अस्पतालको आइसियुमै उपचार भइरहेको र उपचारकै क्रममा निधन भएको बताइएको छ । अभिनय गरेका रोक्काले ‘पिरती आफै हुँदो रहेछ’, ‘प्रेम युद्ध’ लगायत केही फिल्ममा नायकको रुपमा समेत अभिनय गरेका छन् ।
फिल्म ‘प्रेम युद्ध’ उनले निर्माण गरेको चलचित्र हो । अर्थात उनी फिल्म निर्माता समेत थिए । घर, संघर्ष लगायत थुप्रै सिरियलमा समेत अभिनय गरेका उनी काठमाडौ चन्दागिरी १ का स्थायी बासिन्दा हुन् । उनका दुई छोरा र एक श्रीमती छन् । उनको आजै सतुङ्गलस्थित त्रिवेणी घाटमा अन्त्येष्टी गरिएको छ ।पुराना अभिनेता चन्दन रोक्काको निधन भएको छ । उनको बिहिबार बिहान शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो ।
Prevआज घट्यो की बढ्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
Nextजीवनसाथीका लागि धेरै नै भाग्यशाली हुन्छन् यी ३ राशिका युवती, तपाईको कुन ?
काठमाडौंमा अवतरण गर्न लाग्दा फ्लाई दुबईको जहाजमा चरा ठो’क्कियो